Vadzidzisi uye Gentleman, Pamusoro pevashandi vose. Ndapota Usadhakwa doro. Kushanda iyi gig haina kusvika pedyo nekuripa. - NYE kuverengwa kweJs, Vjs, Nightclubs 2019
Vadzidzisi uye Gentleman, Pamusoro pevashandi vose. Ndapota Usadhakwa doro. Iyo haisi iyo nzira yokutanga 2018!